6.6-quake hits off PNG's Bougainville - News Fitsipika
6.6-horohorontany Hits eny PNG ny Bougainville
A mafy horohorontany maridrefy 6.6-namely eny Papouasie-Nouvelle-Guinée ny Bougainville Island ny Sabotsy nefa tsy nisy mety ny niely patrana ny tsunami, seismologists nanao hoe:.
ny horohoron-tany, Nananika ny niverina avy amin'ny voalohany nitatitra maridrefy ny 6.9, voa amin'ny 0104 GMT ary mifantoka 59 kilaometatra (36 kilaometatra) atsimo andrefan'i ny tanàna ny Panguna tamin'ny Bougainville amin'ny lalina 24 kilaometatra, ny US Geological Survey nanao hoe:.
Tamin'ny voalohany ny USGS Tombanana nanao hoe: nisy ambany Azo inoana ny niharam-boina sy ny fahavoazana.
Araka ny Hawaii-monina Pacific Tsunami Warning Center dia tsy nisy atahorana ny manimba hatraiza hatraiza ny tsunami mifototra amin'ny angon-drakitra ara-tantara.
Geoscience Australia norefesiny ny horohoron-tany amin'ny maridrefy 7.0 ka hoy izy dia nahatsapa angamba ao anatin'ny nipoaka malalaka, miaraka amin'ny mety ho voafaritra mangovitra fahavoazana.
“Satria izany toy izany hetsika lehibe misy mety ny fahavoazana ao amin'io faritra io,” seismologist Emma Mathews nilaza AFP.
“Saingy na inona na inona avy amin'ny olon-tsotra ho toy izany horohoron-tany-mora firenena.”
Hoy Mathews izany no farany tao vao haingana sampahom-horohoron-tany any amin'ny faritra Panguna, amin'ny dimy fisehoan-javatra voarakitra ao amin'ny herinandro lasa mahery ao anatin'izany ny maridrefy 7.6 ary 7.5 hovitra izay Niteraka ny tsunami an-toerana fanairana.
Ireo jolts no nahatsapa eto an-toerana, fa tsy nisy tatitra mikasika ny fahavoazana lehibe avy amin'ny faritra lavitra sy mitokana Bougainville, izay mipetraka eo amin'ny nosy Nouvelle-Guinée sy ny Solomons.
Niteraka tahotra ny rumblings ao amin'ny Solomons Honiara renivohitra, mampiraikiraiky avy amin'ny tondra-drano tamin'ny fiandohan'ity volana ity nilaza fa raha kely indrindra 21 fiainana.
“Izany no tena mavitrika faritra, mavitrika tectonic faritra izay mandray avo horohoron-tany matetika ny asa,” Mathews hoy.
Mihozongozona ny toy izany maridrefy Fahita amin'ny PNG, izay mipetraka eo amin'ny antsoina hoe Pacific “Ring ny Fire”, ny hidirana ho an'ny horohorontany asa noho ny disadisa eo tectonic takelaka.
Tamin'ny volana Oktobra, 7.1-maridrefy iray horohoron-tany namely ny faritra iray ihany — manodidina 65 kilaometatra andrefan'i Panguna.
Tamin'ny taon-dasa tamin'ny volana Febroary ny mitokana tanànan'i Lata ao amin'ny Solomons voadonan'ny iray ny tsunami nandravarava taorian'ny horohorontany maridrefy 8,0-. Tsunami sisa, fara fahakeliny 10 ny olona maty, rava-jatony ny trano sy namela tsy manan-kialofana an'arivony ny olona.
Ity lahatsoratra ity, 6.6-horohorontany Hits eny PNG ny Bougainville, dia mpilaza vaovao avy amin'ny AFP, ary dia nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2014 AFP. Zo rehetra voatokana
Amazon manampy 5,000 asa, fandraisana mpiasa avokoa ny mihoatra noho 7,000
Abramovich rivotra ny tahirim-bola fampandrosoana Rosiana
Dika mitovy ny Schindler ny lisitra tsy mahavita mahita eBay ...
Super rivo-doza karavasy Filipina, Taiwan, lohan'ny for ...
13507	0 Bougainville Island, horohoron-tany, Geoscience Australia, Pacific Tsunami Warning Center, fampidirana, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Solomona, United States Geological Survey
← William sy Kate namely ny tora-pasika ao amin'ny Sydney fitsidihana Six maty, 290 tsy hita ao amin'ny S. Korea baka efa hilentika →